MSI GL62M 7RD - 223CN ဂိမ်းလက်တော့ပ် (i7-7700HQ, GTX1050 2GB, 8GB RAM) စျေးနှုန်းမှ ...
အစကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှတ်ချက်စာအုပ်MSI သည် GL62M 7RD - 223CN Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050 2GB, 8GB RAM ကို)
MSI သည် GL62M 7RD - 223CN Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050 2GB, 8GB RAM ကို)
စျေးနှုန်းသမိုင်းကို MSI GL62M 7RD - 223CN Gaming Laptop ကို
€ 3,98 - မတ်လ 2020, 28
€ 18,07 - မတ်လ 2020, 27
€ 1.327,22 - မတ်လ 2020, 25
€ 3,98 - ဇန်နဝါရီလ 2020, 8
€ 1.327,22 - ဒီဇင်ဘာလ 2019, 27
€ 616,96 - အောက်တိုဘာလ 2019, 2
မှ: အောက်တိုဘာလ 2019, 2
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 1.327,22 - အောက်တိုဘာလ 2019, 11
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 3,98 - ဇန်နဝါရီလ 2020, 8
MSI သည် GL62M 7RD - 223CN Gaming Laptop ကို
62CN Gaming Laptop ကို - MSI သည် GL7M 223RD refurbished
တစ်ဦးနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး 15.6 လက်မ FHD က IPS Display ကို, မှပံ့ပိုးသည် Intel Core i7-7700HQ အတူဒီဇိုင်း Processor, HDMI output, featuring Nvidia GeForce GTX1050 2G ဂရပ်ဖစ်, ဤအရာအားလုံးကိုဂိမ်းကစားဂိမ်းကြီးစိုးများအတွက်အပြည့်အဝ suite ကိုပေးခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားအမှန်တကယ်ချောမွေ့စွာဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဆက်ကပ်။အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
● Microsoft Windows နဲ့ 10 OS ကို
7GHz မှတက်● Intel Core i7700-2.8HQ Quad Core 3.7GHz,
● Nvidia GeForce GTX1050 GDDR5 2G ဆကျကပျဂရစ်ဖစ်
8GB အထိအဆင့်မြင့် multitasking များအတွက်● 4GB DDR32 RAM ကို,
● 128GB SSD ကို + 1TB HDD သိုလှောင်စွမ်းဆောင်ရည်, M.2 SSD ကိုထောကျပံ့
ဓာတ်ပုံများနှင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာ Chat ကိုများအတွက်●ရှေ့ကင်မရာ
720P ရှေ့ကင်မရာသင်အမှတ်ရစရာအချိန်လေးကိုဖမ်းယူဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat ခွင့်ပြု
CPU ကို: Intel Core i7-7700HQ
graphic chipset: GeForce GTX1050
မော်ဒယ်: GL62M 7RD - 223CN
အမျိုးအစား: Laptop ကိုဂိမ်းကစားခြင်း
CPU ကိုစီးရီး: Core i7
Hard Disk ကို Interface အမျိုးအစား: SATA 3.0
Hard Disk ကိုမှတ်ဉာဏ်: 1T HDD + 128SSD
အကြီးဆုံး RAM ကိုစွမ်းဆောင်ရည်: 32GB
RAM ကိုပေါက်အရေအတွက်: နှစ်ဦး
RAM ကိုအမျိုးအစား: DDR4
LAN Card ကို: ဟုတ်ကဲ့
WLAN Card ကို: ဟုတ်ကဲ့
screen size: 15.6 လက်မ
Mini ကို HDMI slot ပါ: ဟုတ်ကဲ့
RJ45 connector ကို: ဟုတ်ကဲ့
SD ကဒ်အပေါက်: ဟုတ်ကဲ့
USB ကအိမ်ရှင်: ဟုတ်ကဲ့ 1 × USB2.0 +2× USB3.0
Mini ကို DP ဆိပ်ကမ်း: ဟုတ်ကဲ့
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: 10.8V / 3834mAh, Li-ion ပေါ်လီမာဘက်ထရီ
အချိန် .:3အားသွင်း -4နာရီ
Skype ကို: ထောက်ပံ့
Youtube ကို: ထောက်ပံ့
ဘာသာစကားများ: Built-in တရုတ်ဗူး။
package အရွယ်အစား: 46.00 x ကို 34.00 x ကို 11.50 စင်တီမီတာ / 18.11 x ကို 13.39 x ကို 4.53 လက်မ
package အလေးချိန်: 4.4110 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 38.80 x ကို 26.00 x ကို 3.00 စင်တီမီတာ / 15.28 x ကို 10.24 x ကို 1.18 လက်မ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 2.2570 ကီလိုဂရမ်
MSI သည် GL62M 7REX Nvidia က 1050 TI ဘတ်ဂျက် Gaming Laptop ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း
MSI သည် GL62M ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Excellent ကဘတ်ဂျက် Gaming Laptop ကို?
တရုတ်ထံမှမှတ်စုစာအုပ်ဂိမ်းကစားခြင်း! ဓိက i62 နှင့် GTX 7Ti + COMPETITION အပေါ် MSI သည် GL7M 1050REX
MSI သည် GL62M 7RD - 223CN Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050 2GB, 8GB RAM ကို) ဗီဒီယိုများ
4.65ထံမှ
Bulut Ozturk - 2019 11 ဇွန်
ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုငါတစ်££ 550 915 laptop.2.7ghz i7 with3.7ghz အဆိုပါ max ကိုများအတွက်ပေးဆောင်! ဒါက amazing.8 GB RAM ပေမယ် 32 မှတက်ထောက်ခံပါတယ်။ စာသားအဘယ်သူမျှမတိုင်ကြားမှုများရှိ card.I အကြီးအကြီးမြတ်ဂရပ်ဖစ်ကို USB 1tb 128 HDD + SSD ကိုနောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ထောက်ခံပါတယ်။ ကီးဘုတ်ပေါ်မနောက်ခံအလင်းယခုအချိန်အထိပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မရှိသေးပေ။ ယေဘုယျအားတည်ဆောက်ရညျအသှေးအကြီးဖြစ်ပြီး, အဲဒါကိုသည်အဘယ်အရာတွေအတွက်အရမ်းထူလက်တော့မဟုတ်ဘူး။ တရုတ် BIOS ကို - ကို Google ကုန်ပစ္စည်းအမည်ဖြင့် + BIOS ကိုအင်္ဂလိပ်, တော်တော် easy.Chinese ကို Windows 10 ဤပြောင်းလဲပစ်ရန် - သင်က settings ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းအဖြစ်လက်ပ်တော့တက်သတ်မှတ်မည်။ Google က Windows အတွက် 10 မီဒီယာဖန်တီးမှု tool ကိုတစ်ဦးက USB ပေါ်တက် kad အစုံ (ရုပ်ပုံလွှာကိုလိုက်နာရန်လွယ်ကူမည်ဘယ်ဟာအွန်လိုင်းလမျးညှနျရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်ကအင်္ဂလိပ်ကူးပြောင်းရန် seperate Laptop ကိုမလိုအပ်ပါ။ တစ်ဦးကို USB အပေါ်မီဒီယာဖန်တီးမှု tool ကိုချပြီးပြီးနောက်ကို turn off သင့်ရဲ့ Laptop ကို, ထို့နောက်ရုံပြတင်းပေါက် 10 ကို install နှင့်အတူမှတဆင့်သွားပါ။ ၎င်းဘာသာစကားအထုပ်နှင့်အတူနှောငျ့ယှကျပါဘူးလိုအပ်သောလျှင်ကို USB မှ boot ဖို့ BIOS ကို setting များကိုပြောင်းလဲသူတို့ကအလုပ်မလုပ်ဘူးများနှင့်လူအများစုအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့မထင်ကြဘူး။
T - 2019 11 ဇွန်
ပြီးပြည့်စုံသော, က Black Excellent ကအလွန်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှု colour-, အ SSD ကို M.2 128GB မော်ဒယ် Samsung က NVMe, ကြီးစွာသောအေးမြနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသော Processor ကိုအဆိုပါစပီကာ Nice Display, ကောင်းသော detailVirtual ဗားရှင်း good.-, ဒဏ်ငွေမဆိုးပေမယ့်မဟုတ် system.- : GTX 1050 TI နှင့် RAM ကို 4GB ပိုကောင်း TI နှင့် GTX 10504GB RAM ကနေတစ်ခုခုရွေးချယ်ဖို့နိုင်သူဖြစ်ရမည်ဖြစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ချေရှိကွောငျး - ကီးဘုတ်တစ် backlight- တရုတ်အဘယ်သူမျှမ AC adapter အီးယူ Windows- ရှိသည်ပါဘူး
သူ Manuel - 2019 11 ဇွန်
ဂရိတ် PC ကိုကြီးစွာသောစျေးနှုန်း။ ငါက Windows partition ကိုအပေါ်ကို Windows အီတလီ 10 ၏စင်ကြယ်သောဗားရှင်းကို install (မျှလိုင်စင် key ကိုလိုအပ်သည်) နှင့် pc အပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူတို့ကငါ့ကို charger ကိုအဘို့အပင် adapter ကိုစေလွှတ်။ , ကောင်းသော Laptop ကိုဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဘို့, CAD / SketchUp ဒီဇိုင်နာ, (Unreal စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ) ဖွံ့ဖြိုးဆဲဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်သင်တန်းဂိမ်းကစားခြင်း၏။ 1050 NVIDIA GPU ကိုဂိမ်းအချို့ဂရပ်ဖစ် settings ကိုနဲ့အတူညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်သည်, ဒါပေမယ့်နေဆဲ ok ပါပဲ။ (ငါသည်ငါ့ desktop ကို pc ပေါ်မှာ 1070 ကိုသုံးပါသောကြောင့်ဒီတစ်ခါလည်းငါပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုသတိပြုပါ) ။
Jakub - 2019 11 ဇွန်
အဆိုပါပစ္စည်းကိုကျွန်မအကြံပြုနိုင်ပါတယ်အလွန်ဝမ်းသာတယ်, လုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်🙂 GearBest လူတိုင်း! ကျနော်ကျိန်းသေနောက်တဖန်အမိန့်ပါလိမ့်မယ်။ shipping မြန်နှုန်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပါ! အဘယ်သူမျှမ
alessandro - 2019 11 ဇွန်
အယ်လ် prezzo di un discreto prodott da Lavoro ဟိုစာနယ်ဇင်း da un ဂိမ်း mostriciattolo Cercavo un လက်ပ်တော့ da Lavoro ma ။ Anche se gioco da poco E veramente apprezzare ။ နှင့်ပစ္စည်း, Bella CONFEZIONE, lo hanno anche dotate dell'adattatore europeo နှုန်း la presa cinese ။ basta andare sul sito အတွက် Italiano scaricare quello Cinese အတွက်တတိယ secondi.Per Windows တွင် Unica Noia la plastica, fantastica အယ်လ် tatto ၏ Cinese lo အတွက် si sporcu subito.Il BIOS အခြေစိုက် drive ကိုဒါ installare အီး tutto da သုည။ Aggiungete ဈကားမောင်းသူ trovate che sul sito MSI ကefinito, neanche 3-4 သတ္တုရိုင်း di lavoro အီး siete pron ဝတ်ဆင်။
Xiaomi က Mi Notebook Pro ကိုလက်တော့ (8GB RAM ကို, ROM ကို 256GB, 15,6 လက်မအရွယ် display, Intel Core i7 Processor, Nvidia GeForce MX150 2GB)
Jumper Ezbook2Ultrabook လက်တော့ (14,1 လက်မမော်နီတာ, 4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB)
Jumper EZBOOK3PRO လက်တော့ (64GB ROM ကို, RAM ကို 6GB, 13,3 လက်မအရွယ်မော်နီတာ)
Xiaomi ကလေတပ် 12 လက်တော့ (12.5 လက်မအရွယ် IPS Monitor ကို, 4GB RAM ကို, ROM ကို 128GB)
Xiaomi Redmi Note94G စမတ်ဖုန်း MTK Helio G85 Octa Core 2.0GHz ၆.၅၃ လက်မ 6.53MP + 48MP + 8MP + 2MP 2mAh NFC ဘက်ထရီကို Global Version
Xiaomi Redmi Note94G စမတ်ဖုန်း MTK Helio G85 Octa Core 2.0GHz ၆.၅၃ လက်မ 6.53MP + 48MP + 8MP + 2MP ...
ကျန်းမာရေးအတွက် KN95 N95 မျက်နှာဖုံးစွန့်ပစ်နိုင်သောရှူရှိုက်နိုင်သောအကာအကွယ်မဟုတ်သောအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများ
KN95 N95 မျက်နှာဖုံးစွန့်ပစ်နိုင်သောရှူရှိုက်နိုင်သည့်အကာအကွယ်မဟုတ်သောဆေးကုသမှုခံယူခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမျက်နှာဖုံးများ ...
Teclast F6 Plus 13.3 လက်မပြောင်းပြောင်းနိုင်သော Laptop 8GB 256GB 360 ° Fip-and FHD IPS Display Touch Screen Intel N4100 Chip 38Wh （10000mAh / 3.8V Fl ဘက်ထရီ
Teclast F6 Plus 13.3 လက်မပြောင်းပြောင်းလက်ပ်တော့ 8GB 256GB 360 ° FHD IPS Display Touch ...